I-Interpol, i-International Criminal Law, Extradition and More: Iseluleko esivela kuMmeli Wezokuvikela
I-Interpol, i-International Criminal Law, i-Extradition nokuningi
Iseluleko esivela kummeli wezokuvikela ubugebengu e-UAE
Umthetho Wezobugebengu Wamazwe Omhlaba i-UAE
Ukumangalelwa ngobugebengu akukaze kube yinto emnandi. Futhi kuba nzima nakakhulu uma lelo cala kuthiwa lenziwa emingceleni kazwelonke. Ezimweni ezinjalo, udinga ummeli oqondayo futhi onolwazi ekubhekaneni nokuhlukahluka kophenyo lwamacala obugebengu kanye nokushushiswa kwamacala.
Ku-Amal Khamis Advocates, sizuze imiphumela ehlukahlukene ephumelele emacaleni okuvikela ubugebengu aphesheya. Abameli bethu bezokuvikela ubugebengu banolwazi nesipiliyoni sokubhekana nezindaba eziphathelene nokuvikela ubugebengu bamazwe omhlaba.
Kulesi sihloko, sizohlola umthetho wamazwe omhlaba wobugebengu nokuthi kungani udinga ummeli owazi izintambo.
I-International Criminal Police Organisation (I-Interpol) iyinhlangano esebenzisana nohulumeni. Isungulwe ngokusemthethweni e-1923, njengamanje inamazwe angamalungu we-194. Inhloso yayo enkulu ukusebenza njengengxenyekazi lapho amaphoyisa avela emhlabeni wonke angahlangana khona ukuze alwe nobugebengu futhi enze umhlaba uphephe.
I-Interpol ixhuma futhi ixhumanise inethiwekhi yamaphoyisa kanye nochwepheshe mayelana nobugebengu obuvela emhlabeni wonke. Ihhovisi elikhulu laziwa njenge-General Secretariat eseLyon, eFrance.
Ezweni ngalinye lamalungu alo, kune-INTERPOL National Central Bureaus (NCBs). La mahhovisi aqhutshwa izikhulu zamaphoyisa kuzwelonke.
Usizo lwe-Interpol ekuphenyweni nasekuhlaziyweni kwedatha ye-forensic yamacala, kanye nokulandela umkhondo wababaleki bomthetho. Banemininingwane emaphakathi equkethe imininingwane ebanzi ngezigebengu ezitholakala ngesikhathi sangempela. Ngokuvamile, le nhlangano isekela amazwe empini yawo yokulwa nobugebengu.
Imikhakha emikhulu okugxilwe kuyo ubugebengu obenziwa nge-inthanethi, ubugebengu obuhleliwe nobuphekula. Futhi njengoba ubugebengu buhlala buvela, inhlangano izama nokwenza izindlela eziningi zokulandela izigebengu.
Lesi saziso yisicelo esenziwa ngabomthetho bezwe, becela usizo kwamanye amazwe ukuxazulula ubugebengu noma ukubamba isigebengu. Ngaphandle kwalesi saziso, akunakwenzeka ukulandela izigebengu kusuka ezweni elilodwa kuya kwelilandelayo. Isaziso sihlanganisa ukwabelana ngolwazi nokusetshenziswa kwabasebenzi; konke okudingekayo ukuze kwenziwe umsebenzi.
Kunezinhlobo ezingaba yisikhombisa zezaziso ze-Interpol ezibandakanya:
Iwolintshi: Lapho umuntu noma umcimbi uba usongo ekuphepheni komphakathi, izwe elisingethe linikeza isaziso esiwolintshi. Banikeza noma yiluphi ulwazi abanalo ngalo mcimbi noma kumsolwa. Futhi kungumsebenzi walelo zwe ukuxwayisa i-Interpol ukuthi umcimbi onjalo kungenzeka wenzeke ngokuya ngolwazi abanalo.
Okuluhlaza okwesibhakabhaka: Lesi saziso sisetshenziselwa ukuthungatha umsolwa okungaziwa ukuthi ukuphi. Amanye amazwe angamalungu e-Interpol enza uphenyo aze atholakale lowo muntu bese kwaziswa izwe elikhiphayo. Ngemuva kwalokho kungenziwa ukukhishwa.
Okuphuzi: Ngokufana nesaziso esiluhlaza okwesibhakabhaka, isaziso esiphuzi sisetshenziselwa ukuthola abantu abalahlekile. Kodwa-ke, ngokungafani nesaziso esiluhlaza okwesibhakabhaka, lokhu akusikho kwabasolwa ngobugebengu kepha okwabantu, imvamisa izingane ezingatholakali. Kungenxa yabantu abangakwazi ukuzikhomba ngenxa yokugula kwengqondo.
Inethiwekhi: Isaziso esibomvu sisho ukuthi kube nobugebengu obukhulu obenziwe kanti umsolwa uyisigebengu esiyingozi. Kuyalela noma iliphi izwe umsolwa akulo ukuthi abheke lowo muntu nokuthi amlandele futhi ambambe umsolwa kuze kube kwenziwa lokho.
Luhlaza: Lesi saziso sifana kakhulu nesaziso esibomvu esinemibhalo efanayo nokusebenza kwayo. Umehluko omkhulu ukuthi isaziso esiluhlaza esobugebengu obuncane kakhulu.
Mnyama: Isaziso esimnyama esenzelwa izidumbu ezingaziwa ezingezona izakhamizi zezwe. Isaziso sikhishwa ukuze noma yiliphi izwe elifunayo lifune ukuthi isidumbu sikulelo zwe.
Isaziso Sezingane: Uma kunengane noma izingane ezilahlekile, izwe likhipha isaziso nge-Interpol ukuze amanye amazwe akwazi ukujoyina ekusesheni.
Isaziso esibomvu sinzima kunazo zonke izaziso nokukhishwa kungadala imiphumela emibi phakathi kwezizwe zomhlaba. Kukhombisa ukuthi lo muntu uyisongo ekuphepheni komphakathi futhi kufanele aphathwe kanjalo. Inhloso yesaziso esibomvu imvamisa ukuboshwa nokukhishwa. Kuleli qophelo, umbuzo omuhle ongawubuza kungaba ukuthi, kuyini ukukhishwa?
Ngaphansi komthetho wamazwe omhlaba, ukukhishwa kwamanye amazwe kuyinqubo lapho izwe elilodwa lidlulisela umuntu kwelinye izwe ukuze ashushiswe noma ajeziswe ngamacala enziwe ezweni lakamuva.
Lokhu kwenzeka kakhulu lapho umuntu enza icala kusimo sokucela kepha abalekele esimeni sokusingatha.
Umqondo wokukhishwa kwamanye amazwe uhlukile ekudingisweni, ukuxoshwa, noma ukuxoshwa. Konke lokhu kukhombisa ukususwa kwabantu ngamandla kodwa ngaphansi kwezimo ezihlukile.
Abantu abangakhishwa kwamanye amazwe bafaka:
labo ababekwe amacala kodwa abangakabhekani necala,
labo abaquliswa icala bengekho, futhi
Labo abazanywa futhi batholwa benecala kodwa kweqa ukugqunywa ejele.
Umthetho we-UAE wokukhishwa kwamanye amazwe ulawulwa yi-Federal Law No. 39 we-2006 (Extradition Law) kanye nezivumelwano zokukhishwa kwamanye amazwe ezisayinwe futhi zaqinisekiswa yizo. Futhi lapho kungekho sivumelwano sokubuyiselwa kwamanye amazwe, abomthetho bazosebenzisa imithetho yendawo ngenkathi behlonipha umgomo wokuphindisela emthethweni wamazwe omhlaba.
Ukuze i-UAE ithobele isicelo sokukhishwa kwamanye amazwe esivela kwelinye izwe, izwe elicelayo kumele lihlangabezane nale mibandela elandelayo:
Icala elibhekene nesicelo sokubuyiselwa ezweni kumele lijeziswe ngaphansi kwemithetho yezwe elicelayo futhi inhlawulo kumele ibe yileso esivimbela inkululeko yomuntu owonile okungenani unyaka owodwa
Uma udaba lokukhishwa kwamanye amazwe luhlobene nokwenziwa kwesigwebo sokugcina, isijeziso esisele esingaqinisekisiwe akumele sibe ngaphansi kwezinyanga eziyisithupha
Yize kunjalo, i-UAE ingenqaba ukukhipha umuntu uma:
Umuntu okukhulunywa ngaye ungowase-UAE
Ubugebengu obufanele buyicala lezepolitiki noma buhlobene nobugebengu bezepolitiki
Leli cala lihlobene nokwephula imisebenzi yezempi
Inhloso yalokhu kukhishwa emhlabeni ukujezisa umuntu ngenxa yenkolo yakhe, ubuhlanga, ubuzwe, noma imibono yezepolitiki
Umuntu okukhulunywa ngaye waphathwa noma angaphathwa ngonya, ukuhlukunyezwa, ukuphathwa ngesihluku, noma isijeziso esibuhlungu, ezweni elicelayo, elingaqondene nobugebengu.
Lo muntu ubevele ephenywa noma ebhekene necala elifanayo futhi kungenzeka ukuthi ukhululiwe noma watholwa enecala futhi usedlulisile isijeziso esifanele
Izinkantolo ze-UAE zikhiphe isinqumo esinqunyiwe maqondana necala okuyisona esiyisisekelo sokukhishwa kwamanye amazwe
Xhumana nommeli wezomthetho wamazwe omhlaba e-UAE
Akuwona wonke ummeli wezokuvikela ubugebengu e-UAE onolwazi oludingekayo nolwazi lokusingatha izindaba zobugebengu zomhlaba wonke. Amacala anjalo ajwayele ukufaka izingxoxo nohulumeni wesifundazwe, kanye nohulumeni bamanye amazwe ezimeni zokukhishwa kwamanye amazwe.
Futhi, imithetho ephathelene nokukhishwa kwamanye amazwe, Izivumelwano Zokusizwa Kwezomthetho Ezihlanganisiwe, izincwadi ezigunyaza ubugebengu, nezinye izindaba ezihlobene emazweni amaningi ziyinkimbinkimbi. Ngakho-ke, kubalulekile ukuthi ube nommeli onerekhodi eliqinisekisiwe lokusingatha izingqinamba zobugebengu zomhlaba wonke.
Abameli bethu ku Abameli be-Amal Khamis banolwazi futhi banamakhono okulwa nezindaba zamanye amazwe zokukhishwa kwamanye amazwe ukuvikela amaklayenti ethu. Ngolwazi lwethu, ikusasa lakho liyagcinwa njengoba sizoqinisekisa ukuthi icala livuna wena. SiyiFemu Yomthetho Wobugebengu eqeqesheke kakhulu, egxile kuMthetho Wezokuvikela Ubugebengu nezinye izindaba ezihlobene nazo. Xhumana nathi namuhla nganoma yikuphi ukukhishwa, izaziso ze-Interpol noma amacala omthetho wamazwe omhlaba.